Ambongadiny Factory ambongadiny tsiro voasarimakirana fikolokoloana manokana bakteria lena mamafa mpamatsy sy mpanamboatra | tsara kokoa
Anaran'ny vokatra: famafana fanadiovana bakteria
Model Model: QMSJ-327
Fitaovana: Lamba tsy misy tenona spunlace avo lenta
Akora ilaina: Benzalkonium chloride, Nov-tenona, Ro-rano
Akora tsy miasa: Aqua, Ethanol, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Parfum.
Sasa isaky ny kapoaka: 200 isa
Fampiasana manokana: Antibacterial, desinfection ary fanadiovana
Antsipirian'ny fonosana： Kapoaka / baoritra 24
Rehefa lasa fantatry ny olona erak'izao tontolo izao ny fiainana salama sy ny fiainam-pahasalamana, BEETER DAILY PRODUCTS CO., LTD dia nanohy nanala ny alikaola sy ny famonoana otrikaina ary ny famonoana bakteria, manantena ny hanampy olona maro kokoa hanome fiainana azo antoka, Salama ary mety. Noho izany, vonona izahay hanome ny fihenam-bidy tsara indrindra araka izay azo atao eo amin'ny fifehezana ny vidiny. Manantena izahay fa hihamaro ny olona hahafantatra ny vokatray.
Ny famafana bakteria dia azo ampiasaina hanadiovana sy hamonoana tanana sy vatana ary mety hamono sy hanadio ny tampon'ny zavatra koa. Ny vahaolana amin'ny fanafody hamafana ny bakteria dia malemy ary tsy dia manimba ny hoditra. Fa raha mahita tsy mahazaka alokaloka na tsy mahazo aina amin'ny hoditra ianao rehefa mampiasa azy dia miangavy anao ajanony ny fampiasana azy ary mangataha torohevitra ara-pitsaboana.
Amin'ny maha orinasa voafafa lena antsika, dia inoanay ny hanome ny mpanjifa vokatra tsara indrindra sy serivisy tsara indrindra. Faly be izahay manamboatra vokatra izay tsy manam-paharoa amin'ny marikao. Manana endrika feno isika. Raha manana fepetra manokana amin'ny fanandramana solo-drano lena ianao, dia azonay atao koa ny manamboatra ny raikipohy arakaraka ny filanao.Efa manana ekipa mpamorona ihany koa izahay izay afaka manome fanampiana amin'ny famolavolana fonosana. Azonao atao ny manova ny fonosana kitapo na afaka mamonosana.
Ity tavy mando antibacterial ity dia mitovy amin'ny karazan-solooka izay vokarintsika taloha. Ny haben'ny famafana dia ampy ampiasaina isan'andro. Misy solo-drano lena 200 isaky ny kapoaka, ampy azon'ny fianakaviana ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ao anatin'ny vanim-potoana manan-kery. Manoro hevitra ihany koa izahay ny hampiasana ny fitsaboana any an-trano, fa any amin'ny birao sy amin'ny toerana hafa.
Ho an'ny fanadiovana ny tanana hampihena ny bakteria amin'ny hoditra.
Soso-kevitra amin'ny fampiasana miverimberina.
Aza atositosika hisokatra ny rantsantanana.
Tazomy mafy ny kaontenera ao amin'ny toerana maina sy mangatsiatsiaka ary misy rivotra tsara. Soso-kevitra fitahirizana mari-pana: O'C ka hatramin'ny 40C.
Teo aloha: Ekeo ny mpanadio fitaratra fiara namboarina mamafa ny fanadiovan-koditra
Manaraka: Menaka fanadiovan-dakozia misy laooro fandoroana lovia fanadiovan-dakozia ao an-dakozia
famafana fanadiovana bakteria
Tissue lena miady amin'ny bakteria
famafana ny bakteria
Famafana bakteria lehibe
famafana bakteria voajanahary
fikolokoloana manokana mamafa kiritika antibaktera
Ny famonoana otrikaretina kely sy mora entina isan'andro dia mampiasa ...